कोरोना संक्रमित ट्रम्प कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ? कसरी भैरहेको छ उपचार ? – Rapti Khabar
असोज १८, बीबीसी । शुक्रबार बिहान कोरोना संक्रमित भएको खुलासापछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई शनिबार हेलिकप्टरमार्फत अस्पताल लगिएको हो । तर उनको स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मी र ह्वाइटहाउसका प्रमुखले फरकफरक बयान दिएपछि स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेको थिएन ।
यसैबीच ट्रम्पले शनिबार बेलुकी आफूलाई धेरै सुधार भएको र छिटै चुनाव अभियानमा फर्कने सन्देशसहित अस्पतालबाटै भिडियो पोस्ट गरेका हुन् ।
आगामी केहीदिन अझै परीक्षणको घडी भएको तर आफूले सबै चुनौतिहरु पार गर्ने बताउँदै ट्रम्पले सो भिडियो मार्फत आफ्ना समर्थक र सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरु माझ धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका हुन् ।
हाल उनको उपचारमा कोरोना भाइरस विरुद्ध विश्वव्यापी प्रयोग गरिँदै आएको एन्टिभाइरल औषधि ‘रेमडेसिभिर’ दिइएको छ जसले उपचारको गति बढाइ ठीक हुन मद्दत गर्ने यसअघिका विभिन्न रिसर्चले देखाइसकेको छ ।
त्यस्तै ह्वाइटहाउस छाड्नु अगाडि भने उनलाई ‘रिजेनेरन’ को ‘पोलिक्लिनिकल एन्टिबडि ककटेल’ औषधि दिइएको थियो जुन अझै पनि परीक्षणको चरणमा रहेको बताइएको छ । तर यसअघिका ट्रायलमा सो औषधिले लक्षणहरु सुधार्न अनि शरीरमा भाइरसको स्तर कम गर्न प्रभावकारी रहेको देखाएको थियो ।
यस औषधिबारे थप अनुसन्धान जारी छ । साथै प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन उनले जिंक अनि भिटमिन डी सप्लीमेन्ट पनि सेवन गरिरहेको उनका फिजिसियनले बताएका छन् । उपचाररत् अवस्थामा अस्पतालका स्टाफहरुले विशेषगरी ट्रम्पको मुटुको गति, तापमान, रक्तचाप अनि अक्सिजनको स्तरमाथि लगातार नजर राख्नेछन् ।
७४ वर्षीय ट्रम्पको तौल करिब ११० किलो रहेको छ जसकारण उनी कोरोनाबाट गम्भीर बिरामी पर्ने उच्च जोखिममा रहेको मानिएका छन् ।
कोभिड–१९ अप्रत्यासित किसिमको भाइरस भएकाले पनि यसले को व्यक्तिमा कसरी कस्तो असर गर्छ भन्ने निश्चित बताउन नसकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
हार्भर्ड मेडिकल स्कुलका इमर्जेन्सी फिजिसियन डाक्टर जेरेमी फस्टले अहिले ट्रम्पको केस हेरिरहेका छन् र उनका अनुसार सबैजना राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जति डराइरहेका थिए, उनी त्यो भन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा छन् ।
उनले भनेका छन्, “शनिबार दिनभरि सुनेको रिपोर्टबाट हामीलाई उनी केही बढी नै बिरामी छन् कि भन्ने लागेको थियो । ट्रम्पले पोस्ट गरेको भिडियोबाट अहिले धेरैले उनी सामान्य भएको अनुमान गरिरहेका छन् ।”
जसबारे फस्टले भनेका हुन्, “तरपनि यो रोग अनौठो किसिमको छ, अहिले उनलाई ठीक भए जस्तो हुन सक्छ तर भिडियो खिचेको १० मिनेट या एक घण्टामा फेरि ऊर्जा नभएजस्तो महसुस हुन सक्छ ।”
त्यसैले पनि तत्काल केही भन्न नसकिने उनले बताए ।
यता ह्वाइट हाउसका प्रमुख स्टाफ मार्क मिडोले भने शनिबार संचारकर्मीहरुसँग बोल्दै उनको अवस्था चिन्ताजनक भएको बताएका थिए जसपछि सबैमा ठूलो द्विविधा उत्पन्न भएको हो । र ट्रम्प नजिकका स्रोतहरुका अनुसार उनी पनि मार्कको सो भनाइप्रति आक्रोशित बनेका थिए ।
तर ट्रम्पका व्यक्तिगत फिजिसियन डाक्टर सिन कोनलेले यसबारे स्पष्टिकरण दिँदै उनको उपचारमा खटिएका सबै स्टाफहरु ट्रम्पको वर्तमान स्वास्थ्य स्थितिबारे सचेत अनि सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
ट्रम्प कहिले अस्पतालबाट डिस्चार्ज होलान् भन्नेबारे चाहिँ उनले केही बताएका छैनन् । डाक्टर कोनलेका अनुसार शनिबार बिहानदेखि ट्रम्पलाई अतिरिक्त अक्सिजन दिइएको छैन र पछिल्लो २४ घण्टा उनी ज्वरो मुक्त छन् ।
अर्कोतर्फ ह्वाइटहाउसका चिफ अफ स्टाफ मार्क मिडोले चाहिँ शनिबारको बयानमा पछिल्लो २४ घण्टा ट्रम्प अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था रहेको र आगामी ४८ घण्टा स्थिति झन गम्भीर हुन सक्ने हुँदा अझै ठीक हुने बाटोतर्फ नरहेको बताएका बताएका थिए । उनका अनुसार ट्रम्पलाई अत्याधिक धेरै ज्वरो आएको थियो र उनको ब्लड अक्सिजन स्तर पनि लगातार घट्दै गइरहेको थियो ।
यसअघि अमेरिकी मिडिया स्रोतहरुले पनि ट्रम्पलाई ह्वाइटहाउसमै हुँदा अक्सिजन चढाउन आवश्यक परेको खुलासा गरेका थिए । प्रथम महिला मेलानीया भने अहिलेसम्म ठीकै रहेको र ह्वाइटहाउसमै आराम गरिरहेको बताइएको छ । शनिबार ह्वाइटहाउसले ट्रम्प अस्पतालबाटै काम गरिरहेको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
चिनियाँ से’नाको विमान भारतसँगको विवा’दित क्षेत्रमा तै’नाथ, भारतले दियो यस्तो चे’तावनी
काठमाडौं, भदौ २५ चिनियाँ जनमुक्ति से’नाको रणनीतिक ब’म–वर्ष’क वि’मान भारतसँगको विवा’दित क्षेत्र नजिक तैना’थ गरिएको देखिएको छ। भारतसँग सीमा वि’वाद जारी रहेको समयमा सिमानामा चीनले कम्तिमा तीनवटा एच–६ बम्बर विमा’न र रि’यान वा’ई–२० एयरलि’फ्टर यु’द्धक विमान तै’नाथ गरेको देखिएको एससीएमपीले जनाएको छ। मंगलबार मात्र चिनियाँ जनमुक्ति सेना’को सामाजिक सन्जाल विबोे अकाउन्टमा तिब्बती क्षेत्रमा ब’म–व’र्षक वि’मान […]
आज २०७७ असोज २५ गते आइतबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरिरले सकारात्मक उर्जा ग्रहण गर्नेछ । आफन्तहरुको सहयोगले उपलब्धिमुलक कामहरु बन्नेछन् भने दैनिकीलाई सहज रुपमा परिणत गर्न सकिनेछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा अध्ययन यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ । नयाँ काम गरि आम्दानिका स्रोत बढाउँन सकिनेछ । प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ […]
सरकारले दाङमा जग्गाको खरिदबिक्री देखियो यस्तो अचम्म